Industrial chigadzirwa kuongorora
Dhizaini, kugadzira uye kuisimbisa yegeji
Management wevatengesi & kuvandudza
Trade kambani ongororo
Kuongorora & optimization ye maneja system
Basa remhando yepamusoro
Zvemagariro Ekuremekedza Kubvunza
Kugamuchirwa kwekutengwa kwehurumende
Kugamuchirwa Kwezvigadzirwa Zvekurima
ANSI uye AQL
Heru Management Management
GIS (General Inspection Service Co, Ltd) inyanzvi yemhando yekugadzira uye kubvunza manejimendi uye kambani yebasa. Izvo zvakazvipira kubatsira vatengi kutanga uye nekuvandudza mhando yekusimbisa uye kunaka kudzora uye nekubatsira vanobatsira vatengi kuvandudza nekutarisa vatengesi vavo. Inokodzera neGeneral Administration yeHurumende Huchengetedzwa uye Kugadziriswa kwePR China, GIS yanga ichipa mabasa ekuongorora wechitatu, kuongororwa kwezvirimwa pamwe nekutarisirwa kwemhando yeprojekiti, kuongororwa kwechigadzirwa uye kuongororwa uye nekubvunzana kwehutano hweinjiniya kubvira 2005.
2005, GIS yakavambwa pamwe neHurumende Assurance Center yeChina Association for Quality uye Fujian Provincial Quality Association.
2009, GIS yakagamuchira ISO9001 chitupa kubva kuPure Assurance Center yeChina Association for Quality.
2010, GIS yakagamuchira Gwaro reKudzidza kweInstitute of Import & Export Commodity Ongorora uye Ongororo kubva kuAQSIQ (General Administration yeHurumende Hukuru, Kuongororwa uye Kugadzikwa kwePRC).
2012, GIS yaive nenhengo yeChina Enter-exit yekuongorora uye Quarantine Association uye yakasarudzwa semukuru manejimendi sangano reExports uye Export Commodity Kuongorora uye Survey Bazi reSangano.
2013, GIS yakagamuchira gwaro reCNAS-C101 (ISO / IEC 17020) kubva kuChina National Accreditation.
2015, GIS yakagamuchirwa neFujian Kuongorora uye Quarantine Association seiyo Adopted institutionof Fujian yemahara yekutengeserana Fuzhou Pingtan nzvimbo (kunze kwenyika zvigadzirwa).
2016, GIS yakagamuchirwa seFujian provincedemonstration yepuratifomu yebasa revanhu kune mabhizinesi madiki uye epakati.
GIS ine mahofisi gumi nemaviri muChina yese. Hofisi yemusoro iri muFuzhou, Fujian. Mamwe mahofisi gumi nerimwe ari muShunde, Dongguan, Shenzhen, Xiamen, Ningbo, Hangzhou, Suzhou, Qingdao, Tianjin, Jinan neZhengzhou. Muchidimbu, isu takavaka yekuongorora sevhisi network muChina. Kusvika parizvino, GIS ine vashandi vanopfuura zana kushumira vatengi. Yedu mhando manejimendi manejimendi, varidzi vezvirimwa, vanoongorora zvigadzirwa, mainjiniya ekugadzira zvigadzirwa uye mainjiniya emhando dzose mainjiniya anokwanisa. Huwandu hwevakuru vekunze kunze kwenyika mumaindasitiri akasiyana siyana vari kuitawo GIS. Mushure memakore ekuedza, GIS iri kuyedza kuve imwe yemakambani anokwikwidza uye ane simba mune ino indasitiri muChina.
Batsira vatengi kuvaka kana kuvandudza maitiro ekudzora mhando, tsvaga matambudziko ari muzvigadzirwa uye vape nyanzvi mhinduro yekudzikisa njodzi yekugamuchira isina kutengeswa zvinhu uye kuderedza kukuvara kwevatengi nekuda kwezvakagadzirwa zvisingadhuri.
Batsira vatengi kuvaka uye kutarisa vatengesi. Inopa nyanzvi inopa zano rekuvandudza kugona kwevashandisi uye kusimba kwemhando uye kugona, kusimudzira kukura kwevanopa uye vatengi vari mukambani.
Inopa nyanzvi yechitatu yekutarisa, kuongororwa kwemuti, chirongwa chemhando yekutarisira, kuongorora zvigadzirwa uye kuongororwa uye kunaka kweinjiniya kubvunza basa uye manejimendi kubvunza ISO 9001, ISO 14001, ISO / TSI 16949, SA8000, QS9000, OHSAS18000, HACCP, GMP zviyero zveindasitiri dzakasiyana siyana.
Yakagadzirirwa tostudying management system uye yekuongorora system ye-e-bhizinesi pachikuva, dhizaini inopa mugadziri uye yekutengesa ongororo yekambani, kuongororwa kwechigadzirwa, manejimendi manejimendi ye-e-bhizinesi pachikuva nevatengesi vepa online.
Yedu bhizinesi yehunyanzvi: Vatengi, Vashandi, Kusimudzira.
Ibasa redu kuenderera mberi nekuvandudza yedu yemhando yebasa kuita kuti vatengi vedu vagutsikane GIS inotarisa mukukura kwevashandi vedu. Tichaita zvatinogona kupa mikana yevashandi vedu. Nenzira iyi, tinogona kukudziridza nevatengi vedu pamwe chete.
Remekedzaishuvira pabasa; Nakidzwa nekunakidzwa kwehupenyu.
Unhu hunofunga kukosha; mutoro unosarudza hunhu
Ziva simba rakasimba rekutsvaga zvinodiwa nevatengi; Tora kugona, kugona kukuru uye simba rinotsigira rekugadzirisa zvirongwa zvevatengi.
Win kuhwina nerukudzo kubva kune vese vatengi
Floor10, Kuvaka C, Unis Sci-Tech Park, Nhamba 30 Wulongjiang Road, High-Tech Zone, Fuzhou, Fujian, China
© Copyright - 2010-2022: Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa. Matipi - Zvigadzirwa - Sitemap - AMP Nhare Ino
Mudziyo Kuisa Supervision , Yazara paInternet Kuongorora , Yechitatu Bato Kuongorora , kweFekitori , Chekutanga Production Chekutarisa , In Kuongorora ,